अनलाइन कक्षा संचालन संगै विद्यार्थीको भविष्य ! - A2Z Online Khabar A2Z Online Khabar
विकसित राष्ट्रहरूमा अनलाइन कक्षा संचालन गर्न कुनै नौलौ कुरा होइन्। तर त्यहाँ पनि अनलाइन बाट कक्षा संचालन गर्दा पढाउने सस्कृती नै हराउने संबेदनसिलता मा प्रस्न उठन थालेको छ । यो बेला तत्काल नेपाल् मा अनलाइन मार्फत विद्यार्थी लाई अध्यपन गराएर शिक्षा मा उप्रेरित गर्न सहज देखिदैन ! कोरोना ले भवाभह अबस्थामा विद्यार्थी यो बेला अध्यन गर्ने मनस्थिति मा तयार छन कि छैन ?
सबैखालको बिद्यार्थी को घरमा इनटरनेट को सुबिधा प्रयाप्त मात्र छ कि छैन ? सबै विद्यार्थी अनलाइन कक्षमा उपलब्ध हुन्छन ? यो बेलामा शिक्षक नै आफै अनलाइन कक्षाको लागि तयारी छन् कि छैनन् ? यो संबेदनसिलता मा केन्द्रिय हुनु पर्ने हुन्छ ? देश कै राजधानी मानिने काठमाडौं कै अधिकांश विद्यार्थी नै इनटरनेट माध्यम बाट बन्चित छन्।
यो बेला कक्षा संचालन गरेपनि अनलाइन कक्षा मा सहभागी हुन सक्ने अवस्था छैन्। अर्थात कम्प्युटर छैन भन्ने ठूलो जनसंख्या गाउँघरमा छ । जहाँ बिजुली समेत प्रयाप्त मात्रमा छैन्। इनटरनेट त परैको कुरा निजि विद्यालयले विद्यार्थी को भविष्य नै डामाडाेल नै भय जसरी अनलाइन भर्ना र अनलाइन कक्षा संचालन का लागि अभिभावक लाई दवाब दिनु उपयुक्त देखिदैन ।
यो बिषय सरकार सङ्गै सम्बधित निकास को ध्यानाकर्षण हुन जरुरी देखिन्छ । निजि विद्यालयले विभिन्न माध्यम बाट केही मात्रमा अनलाइन कक्षा संचालन गरिएता पनि सामुदायिक विद्यालयको भौतिक संरचना अहिले कोरोना महामारीको कारण क्वारेन्टाइन को प्रयोग गरिएको बेला विद्यार्थी लाई कक्षा संचालन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय बहस हुनु सान्दर्भिक देखिदैन ।
कोरोना ले सहज रुप नलिदा सम्म बिधालय सन्चालन गरिनु थप जोखिम निम्त्याउनु हो त्यसैले सम्धित निकाय को ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक देखिन्छ ।